54 “Obonin a woanwo,+ di ahurusi! Wo a wontee awo yaw,+ ma w’ani nnye na fa ahosɛpɛw bɔ ose,+ efisɛ ɔbea a wɔapo no mma dɔɔso sen nea ɔwɔ kunu de,”+ Yehowa na waka. 2 “Ma wo ntamadan mu ntrɛw.+ Ma wɔntwe wo tenabea kɛse no ntama mu. Nnyaw hwee. Ma wo ntamadan ahama nyɛ tenten, na ma mpɛɛwa mu nyɛ den.+ 3 Wobɛtrɛw akɔ nifa ne benkum,+ na wo mma bɛfa aman adi so,+ na wɔbɛkyekye nkurow a ɛda mpan atena mu.+ 4 Nsuro,+ na w’anim rengu ase;+ mma w’ani nnwu, na wo nsa rensi fam.+ Wo werɛ befi wo mmabaaberem aniwu,+ na worenkae wo kunayɛ mu ahohora bio.” 5 “Wo Yɛfo Kɛse+ no ne wo kunu,+ asafo Yehowa ne ne din.+ Israel Kronkronni no ne wo Gyefo,+ na wɔbɛfrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn.+ 6 Yehowa frɛɛ wo te sɛ ɔbea a ne kunu apo no ma ɔredi awerɛhow;+ sɛ ɔbea a waware ne mmabaaberem+ a wɔagyaa no,”+ wo Nyankopɔn na ose. 7 “Migyaa wo bere tiaa bi,+ nanso me mmɔborɔhunu kɛse bɛka wo aboa ano.+ 8 Bere a m’abufuw yirii no, mede m’anim hintaw wo bere tiaa bi,+ nanso m’adɔe a ɛwɔ hɔ daa nti, mehu wo mmɔbɔ,”+ wo Gyefo+ Yehowa na waka. 9 “Mihu eyi sɛ Noa nna no.+ Na sɛnea mekaa ntam sɛ Noa nsu no remfa asase so bio no,+ saa ara na maka ntam sɛ me bo remfuw wo na merenka w’anim bio.+ 10 Mmepɔw befi hɔ na nkoko ahinhim,+ nanso m’adɔe remfi wo so,+ na m’asomdwoe apam renhinhim,”+ Yehowa a ohu wo mmɔbɔ+ no na waka. 11 “O ɔbea a wo ho hiahia wo,+ wo a ahum abɔ+ wo a wunni awerɛkyekye+ biara, mede dɔte a ɛyɛ den bɛhyehyɛ w’abo,+ na mede hoabo+ bɛto wo fapem.+ 12 Mede aboɔden abo kɔkɔɔ bɛto w’aban atifi, na mede nnyansramma abo bɛyɛ wo kurow pon,+ na mede abo a ɛyɛ fɛ bɛto w’ahye. 13 Yehowa ankasa bɛkyerɛkyerɛ+ wo mma+ nyinaa, na wo mma asomdwoe bɛdɔɔso.+ 14 W’ase betim trenee mu.+ Wo ne nhyɛso ntam bɛware,+ na worensuro obiara; wo ne ahude nso ntam bɛware, na ɛremmɛn wo.+ 15 Sɛ obi bɛtow hyɛ wo so nso a, ɛnde na emfi me.+ Na obiara a ɔde n’asɛm bɛba wo so no, wo nti ɔbɛhwe ase.”+ 16 “Hwɛ, me na mebɔɔ ɔtomfo, nea ohuw+ ogya+ mu yɛ akode sɛ ne nsa ano adwuma no. Na me ara na mebɔɔ ɔsɛefo+ a ɔsɛe ade. 17 Akode biara a wɔbɛyɛ de aba wo so no renyɛ yiye,+ na tɛkrɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo wɔ asɛnni mu no, wubebu no fɔ.+ Eyi ne Yehowa asomfo agyapade,+ na wɔn trenee fi me,” Yehowa asɛm ni.+